Igumbi lesitudiyo elitofotofo - I-Airbnb
Igumbi lesitudiyo elitofotofo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDewi
Hlala uthe zava kwigumbi lesitudiyo elifudumeleyo elinendawo entle yokubuka isixeko kunye nechibi ecaleni kwayo. Igqityiwe ngekhitshi, ubungakanani bebhedi enkulu kunye nendawo yokusebenza ene-wifi engenamida, ukuhlala kwakho kuza kuba ngathi likhaya. Yonwabela iindawo ezahlukahlukeneyo: ipuli yokuqubha, indawo yokudlala yabantwana, indawo yokujima, indawo yokuthenga, i-cinema kunye neendawo zokutyela ezahlukahlukeneyo.
Ngenxa yesizathu sempilo nokhuseleko kuzo zonke iindwendwe, le ndlu isecaleni icocwa ngento ebulala iintsholongwane ngaphambi kokubhalisa xa zifika.
Igumbi lakho lokulala eliyi-20 elinekhitshi, ifriji, umatshini wokwenza ikofu, ibhedi enkulu eyi-1, iwardrobes, iTV enkulu, i-wifi yasimahla, itafile yokusebenza, ibhalkhoni encinci, indlu yangasese negumbi lokuhlambela.
30" TV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo, I-Netflix
Indawo yokuma eyi-1: indawo etofotofo, indawo ethe ngqo kwi-Lave mall, i-cinema, iivenkile zokutyela ezahlukahlukeneyo, ipuli yokuqubha, ijimu, kunye nezinye izinto onokuzenza. Kufuphi neGrand Metropolitan mall, isibhedlele iPrimaya Kalimalang, isibhedlele iBudi Lestari kunye nesibhedlele i-RSUD Kota Bekasi.
Umbuki zindwendwe ngu- Dewi
Ungandithumelela umyalezo ngoAirbnb
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kecamatan Bekasi Selatan